Ungayigcina njani inkqubo yokuqhekeza yokuhambisa umxube wekhonkrithi?
Imiyalelo yolondolozo lwenkqubo yokuqhekeza yomxhubi wekhonkrithi: Umqhubi ngamnye wokulayisha umxube wekhonkrithi ufumene imeko yokunqwala intloko xa uqhuba. Oko kubizwa ngokuba kukunqwala intloko kukuba i-brake yomelele kakhulu, ikhokelela kutshintsho ngequbuliso lwevili lokumisa, umzimba phantsi kwe ...
Loluphi uhlobo self yokulayisha Umxhubi ngcono?
Kukho abavelisi abangaphezulu nangakumbi bokuzilayisha ngokwabo umxube wekhonkrithi, kwaye iintlobo zemveliso zinzima, ezizisa ubunzima kubasebenzisi bokuthenga; 1.Ukuqonda iiparameter zentsebenzo yokuzifaka ngokwakho umxube wekhonkrithi, umzekelo, sinokubona ukuba loluphi uhlobo lweinjini esizikhethayo, kangakanani ...
Ukugcinwa kwezi zinto zintandathu akunakukwazi ukwenziwa!
1. Uxinzelelo lwamavili luphezulu kakhulu Kwinkqubo yokusebenzisa i-excavator, ulondolozo lwamavili lubaluleke kakhulu. Ngokubanzi, uxinzelelo lwamavili lunokuhlengahlengiswa ngokungqinelana noxinzelelo oluqhelekileyo loomatshini ekwindla nasebusika xa ubushushu kufanelekile. Nangona kunjalo, uxinzelelo oluqhelekileyo alukho ...
Kuthiwani malunga nesenzeko se "nodding" kwisilinda esine-hydraulic ye-excavator?
Inkqubo yokufumanisa isifo se-hydraulic cylinder nodding kwi-excavator. Ngeli xesha, sebenzisa i-buc ...
Yintoni ekufuneka ihlawulwe xa injini yokulayisha ivili isebenza?
1. Emva kokuba injini yokulayisha ivili iqalile, ikulungele ukuqala xa uxinzelelo lwe-braking lufikelela kuxinzelelo lokhuseleko, ukwenzela ukuqinisekisa ukhuseleko lwe-braking ngexesha lokuqhuba. Iyaqina Kwimeko yokuqhekeza okungxamisekileyo, cofa iqhosha likaxakeka kunye nevalve yokupaka (iqhosha linga ...
Yintoni ekufuneka ilayishe ibackhoe loader xa icoca?
Umlayishi we-Backhoe usetyenziswa ikakhulu kwiindawo zokwakha. Kwimizi-mveliso yethu yokwakha yale mihla, ikwangumsebenzi wam ukuba nezixhobo zokwakha ezingabizi mali ininzi Into esinomdla wayo kukuphucula umlayishi we-backhoe kunye nebhodi emfutshane ekusetyenzisweni kamva, kunye nokusetyenziswa kwethu kwangoko Iingxaki ezenziwa l backhoe l .. .
Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa usebenzisa iilori ze-forklift?
Imiba efuna ingqwalaselo xa usebenzisa iilori ze-forklift zibandakanya: 1. Ekusebenziseni iilori ze-forklift, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ukutshaja kwangexesha ibhetri kunye nokugcinwa ngokuchanekileyo kwebhetri. Nika ingqalelo indlela xa utshaja ibhetri yokugcina igcwele ngokupheleleyo ngaphandle kwe-ov ...
Yintoni ekufuneka ihlawulwe nge-4 Wheel Drive Forklift Truck injini?
4 ivili drive forklift iinkuphelostencils kunokusinceda ukusombulula a lot of iingxaki zokuhamba, ingakumbi ezinye ezinkulu isamente Iizilebhu, ikhonkrithi, njalo njalo, ezinokuthi zihanjiswe ngokuthe ngqo yi-4 ivili lokuqhuba forklift iinkuphelostencils. 4 ivili drive forklift iinkuphelostencils isoloko kusetyenziswa kulwakhiwo site ukwakhiwa kunye r ...
Ukunciphisa njani ukusetyenziswa kwamandla okungeyomfuneko ngexesha lokusebenza kwesikhuseli
Okokuqala, nciphisa ilahleko yamandla engeyomfuneko. 1.Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kunye nokukhuselwa kwemibhobho yokukhupha kunye nezintambo, kubandakanya ukususwa rhoqo kwecoke kwisithinteli, ukulungiswa kwangexesha kwezinto ezonakeleyo, akukho sidingo sokufaka imibhobho yokukhupha phambili, akukho mfuneko yokuzenzela ngokwakho kunye nemibhobho emide yokukhupha, njl. 2.Ke ...
Itekhnoloji yeyona mveliso iphambili, lo matshini wokuxuba ikhonkrithi uyayenza
Isantya sobunjineli baseTshayina sidume kakhulu kwihlabathi, kwaye oomatshini bobunjineli abaphambili badlala indima ebalulekileyo. Umxhubi weloli ye-WIK utshintsha ngokupheleleyo imveliso yekhonkrithi. Inkqubo efanelekileyo kunye nekrelekrele yenza imveliso ibe lula kwaye ilula. Ukondla, ubunzima kunye nokudibanisa inaliti yaManzi kunokuthi ...
Kutheni le nto abaXubeki beKhonkrithi abaZenzekelayo bethandwa kangaka
Ukuphehlelelwa koomatshini abaxubileyo bekhonkrithi kuvule indlela entsha yokusebenzisa ikhonkrithi kwiiprojekthi ezincinci neziphakathi, ezoqoqosho kwaye zilungele, kwaye uninzi lweeprojekthi ezincinci neziphakathi zizithengile kule projekthi. Phakathi kweelori zokuxuba ezizimeleyo ezininzi, le lori yokuxuba yi v ...
Abasebenzi bakulawula njani ukusebenza kweeMixers eziLinganayo eziLungiselelweyo_Ziyilwa njani iixube zokuZilayisha iiKhonkrithi?
1. Emva kokukothula kwindawo yokwakha, khawuleza ugungxule isipha sokutya, ukhuphe i-hopper, kwaye ukhuphe i-chute ngombhobho oza netraki yokuxuba ukususa udaka kunye nekhonkrithi ebambelele emzimbeni. Buyela Endleleni ebuyela kwisitishi sokuxuba, i-150-2200L yamanzi kufuneka ibe ...
鲁 ICP 200 2020042682 号 -1
Isivuseleli sokumba, Self Ukulayisha Umxhubi eziphathekayo, IsiVali seMini esiNcinci, I-Bucket Wheel Loader, Isilayisha iVili, Lw300kn ivili lokulayisha,